Samachar Batika || News from Nepal » स्कर्पियो दु’र्घटना हुँदा आमा छोराको मृत्यु बाबु छोरी घा’इते !
स्कर्पियो दु’र्घटना हुँदा आमा छोराको मृत्यु बाबु छोरी घा’इते !
हेटौँडा – मकवानपुर जिल्लास्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समितिका संयोजक तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष डा कृष्ण धितालको परिवार सवार जीप दुर्घटना हुँदा धितालकी श्रीमती र छोराको मृत्यु भएको छ । जीपमा सवार तीन जना घाइ’ते भएका छन् ।
सोमबार साँझ मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको १७ किलो भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको थियो । दु’र्घटनामा धितालकी श्रीमती प्रभा गौतम र छोरा अनुजको मृत्यु भएको हो । स्कर्पियो जीपमा काठमाडौँबाट हेटौँडातर्फ आउने क्रममा भारतीय ग्यास बुलेटसँग ठो’क्किएर दुर्घ’टना भएको चितवन प्रहरीले जनाएको छ ।
दुर्घ’टनामा परी चालक राजन घिमिरे ग’म्भीर घा’इते भएका छन् । यस्तै कृष्ण धिताल र छोरी वर्षा मध्यम अवस्थामा रहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । धिताल परिवार सवार बा१३च ५९२९ नंको स्कर्पियो नारायणगढबाट मुग्लिङतर्फ जाँदै गरेको एनएल ०१०५१६० भारतीय नम्बरको ग्यास बुलेटसँग ठो’क्किएर दुर्घ’टना भएको हो ।
त्यस्तै सैनामैना नगरपालिका– ८ कलौनीमा भएको सवारी दु’र्घटनामा बाबुछोराको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा सैनामैना– १ वनकट्टाका ५० वर्षीय टेकबहादुर परियार र उहाँका ३० वर्षीय छोरा सन्तोषको मृत्यु भएको हो ।
दुर्घ’टनामा घा’इते दुवैको उपचारका क्रममा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सन्तोष जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी जवान हुनुहुन्छ ।
बुटवलबाट पश्चिम आउँदै गरेको लु ५२ प ६२२९ नम्बरको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु २ च ८५२९ नम्बरको कार ठो’क्किँदा दुर्घ’टना भएको प्रहरीले जनाएको छ । कार प्रहरीको नियन्त्रणमा छ ।
प्रकाशित मिति १६ असार २०७७, मंगलवार ०८:३३